गठबन्धन गन्थन – Himalaya Times ।। One of the leading Newspaper in Nepal is Himalaya times. The online portal of ehimalayatimes.com
अर्गानिक बाली संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि कृषि मेला
३० बैशाख २०७९, शुक्रबार ०८:४५
सत्ता गठबन्धनका राजनीतिक दलहरूले चुनावका लागि पनि गठबन्धन गरेका छन् । उता प्रतिपक्षी दलहरूले पनि प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरूपमा चुनावी गठबन्धन गरेकै छन् तर यो गठबन्धनप्रति जनतामा आशंका छ । स्वयं गठबन्धनभित्र पनि गडबडी छ । सत्तास्वार्थले प्रेरित यो गठबन्धन देशका लागि घातक छ भन्ने एकथरिको विश्लेषण छ । यो विश्लेषणलाई पूरै गलत हो भन्न सकिने बलियो आधार छैन । बरू सही हो भन्ने धेरै आधार छन् । नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष्ठानबाट प्रकाशित ‘नेपाली बृहत् शब्दकोश’मा ‘गठबन्धन’लाई ‘कुनै काम-कुराका लागि एक भएर मिल्ने काम, परस्परको मिलेमतो’ भनेर अथ्र्याइएको छ ।
विशेषगरी राष्ट्रिय नीतिनिर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म यस्तो गठबन्धनले सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो । त्यसैले स्थानीय अथवा राष्ट्रियस्तरका कामहरूमा पनि स्थानीय व्यक्ति, संघसंस्था र राजनीतिक दलहरूबीच असल नियतले यस्तो मिलेमतो भए समाज र राष्ट्र निर्माणको कामले सकारात्मक गति लिन्छ भन्ने आममान्यता पनि हो । खासगरी असल काम अर्थात् राम्रो उद्देश्यले यस्तो मिलेमतो गरिन्छ जसमा सबैको मत मिलेको हुन्छ अर्थात् सबै एक मत हुन्छन् । जहाँ मिलेर सल्लाह गरिन्छ, परामर्श गरिन्छ ।
समान विचार हुन्छ र मत मिल्छ । फरक मत र फरक विचार हुन्नन् । फरक मत र फरक विचारलाई मिलाएर नै एकमत बनाइन्छ र मिलेमतो गरिन्छ । तर यस्तो मिलेमतो अर्थात् गठबन्धनले सबैलाई हित नै गर्छ भन्ने ग्यारेन्टी चाहिँ हुँदैन । पछिल्लो समय राजनीतिकवृत्तमा गठबन्धन निकै लोकप्रिय छ । गठबन्धनले निकै ठूलो महत्व पनि पाएको छ । यो स्थितिलाई नियाल्दा जनता खुशी हुनुपर्ने हो । राजनीतिक दलको गठबन्धनले जनता आश्वस्त हुनुपर्ने हो र जनताले चैनको सास फेर्नुपर्ने हो तर भइरहेको छ उल्टो ।
राजनीतिक दलको गठबन्धन देखेर जनता सशंकित हुन्छन्, तर्सिन्छन् । डराउँछन् र भयभीत हुन्छन् अनिष्टको आशंकाले । किनभने अहिलेको राजनीतिक गठबन्धन ‘कुनै कामकुराका लागि एक भएर मिल्ने काम, परस्परको मिलेमतो’ नभएर ‘कुनै स्वार्थ-सिद्धिका लागि गरिने आपसी साँठगाँठ’ भएको छ । नेपाली बृहत् शब्दकोशमा गठबन्धनको दोस्रो अर्थको रूपमा यसरी नै अथ्र्याइएको छ ।
सरकार बनाउन होस् अथवा चुनाव लड्नका लागि, राजनीतिक दलहरूले पहिलो होइन दोस्रो अर्थसँग मिल्ने गरी गठबन्धन गर्ने गरेका छन् अर्थात् कुनै स्वार्थ-सिद्धिका लागि आपसी साँठगाँठ गर्ने गरेका छन् । जुन साँठगाँठ आमनागरिकका लागि हितकर होइन हानिकारक छ, घातक छ । असल काम र राम्रो उद्देश्यले गठबन्धन हुने गरेकै छैन । राजनीतिक दलहरूको स्वार्थ-सिद्धिका लागि नै सिद्धान्त नमिल्ने, विचार नमिल्ने र व्यवहार नमिल्ने राजनीतिक दलबीच गठबन्धन हुनेगरेको छ ।
स्थानीय तह निर्वाचनमा हारबाट जोगिन र इज्जत जोगाउन सत्तासीन प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच नै यस्तो गठबन्धन भएको छ । यसो त अहिलेको सरकार नै गठबन्धन सरकार हो । यो सत्ता गठबन्धन सरकारले जितका लागि चुनावी तालमेल गरेको छ । जनताले बुझेको र बुझ्न अपरिहार्य के हो भने यो गठबन्धन जनताको हितका लागि भएको हुँदै होइन । सरकार टिकाउन र चुनावमा हारबाट जोगिनका लागि मात्रै यस्तो गठबन्धन गरिएको हो । यो गठबन्धनको उद्देश्य अपवित्र छ, घातक छ ।
चुनावपछि यो गठबन्धन आफसेआफ तोडिनेछ र राजनीतिक दलहरू आआफ्नो ध्रुवमा फर्किने छन् । दक्षिणी ध्रुव दक्षिणतिर र उत्तरी ध्रुव उत्तरतिर नै । त्यतिखेर गठबन्धन गरेका राजनीतिक दलहरूको न विचार मिल्नेछ न त मत नै । मिलेमतोको अर्थ नै एकाएक गायब हुनेछ । स्वार्थ मिलेरमात्रै तिनको मत मिलेको हो । अरू बेला एकले अर्कोलाई सत्तोसराप गर्ने र धारेहात लाउने दलहरूबीचको गठबन्धन नै विश्वका सातौंपछिको आठौं अथवा नवौं आश्चर्य हो । स्वार्थ–सिद्धिका लागि भएको यो गठबन्धनले जनतालाई केही दिँदैन ।
चुनावमा दुई चार सिट बढी जितेर पहिलो, दोस्रो वा तेस्रो दल बने पनि जनताको मनमा ती पहिलो, दोस्रो वा तेस्रो बन्न सक्दैनन् । चुनावका लागि भएको यो गठबन्धनको औचित्य चुनावपछि स्वतः समाप्त हुनेछ । त्यसपछि दलहरू फेरि पुरानै लयमा फर्कनेछन् र चुनावमा भएको हार र जितको नतिजालाई लिएर पनि एकले अर्कोलाई आरोप-प्रत्यारोप लाउन थाल्नेछन् ।
केवल स्वार्थ–सिद्धिका लागि मिलेका राजनीतिक दलहरूबाट जनताले कुनै कुराको अपेक्षा गर्नु नै व्यर्थ छ । यो गठबन्धन केवल चुनाव जित्नका लागि हो । चुनाव जितेर देश लुट्नका लागि हो । देश लुट्न उद्यत राजनीतिक दलका नेतालाई भोट दिएर चुनाव जिताउनु जनताको जित होइन ठूलो हार हुनेछ । अपवित्र गठबन्धनबाट चुनाव जित्ने नेताहरू देशका लागि भार हुनेछन् । अपवित्र गठबन्धनभित्र भ्रष्टाचार र कुशासनलाई प्रश्रय दिने कुत्सित उद्देश्य निहित छ । सचेत नागरिक त्यो उद्देश्य पूरा हुन नदिनका लागि अझै सचेत हुनु जरुरी छ ।
चुनावी तालमेल गरेका राजनीतिक दलहरूले छुट्टाछुट्टै चुनावी घोषणापत्र जारी गरेका छन् । तर, अघिल्लो चुनावको घोषणापत्रका वाचाहरू नै पूरा नगरेको अवस्थामा अहिलेको वाचाले सचेत जनतामा कुनै प्रभाव नपार्ने निश्चित छ । तैपनि गठबन्धनकै बलमा चुनाव जित्ने आश राजनीतिक दलहरूले गरिरहेका छन् जुन अस्वाभाविक पनि होइन । किनभने जस्तोसुकै गएगुज्रेको भए पनि आफ्नो राजनीतिक आस्थाको दललाई चुनाव जिताउने प्रयत्न हरेक लम्पट कार्यकर्ताले गर्ने गरेकै छन् । राजनीतिक दल होइन, असल र देशका लागि आवश्यक नेता चिनेर भोट दिने स्वविवेकको निर्णय जनताले नगरेसम्म राजनीतिक दलहरूले यसरी नै जनतालाई भर्सेलामा पारिरहने छन् र देशलाई लुटिरहने छन् ।
यसो त पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनले केन्द्रबाटै सहमति गरेर देशभर चुनावी तालमेल गर्ने निर्णय गरे पनि दल र नेताहरूको आ–आफ्नो कुत्सित स्वार्थले पूर्णरूपमा त्यस्तो तालमेल हुन सकेको छैन । तालमेल हुन नसक्दा बागी उम्मेदवारहरू खडा भएका छन् भने अन्य स्वतन्त्र उम्मेदवारले पनि तालमेलका उम्मेदवारलाई दरो चुनौती दिएका छन् ।
संविधान र लोकतन्त्र दिगो बनाउन गठबन्धन आवश्यक रहेको भनिए पनि यो भनाइभित्र सत्यता छैन । सत्य केचाहिँ हो भने पद, पावर र पैसाका लागि हो गठबन्धन । हरेक नेतालाई पद, पावर र पैसाको नशा लागेको छ, जुन कुनै हालतमा छोड्न सक्दैनन् र छोड्न चाहँदैनन् । यस्तो गठबन्धनबाट आमनागरिकले के अपेक्षा गर्ने र कस्तो अपेक्षा गर्ने ? गठबन्धन सरकारबाट अहिलेसम्म जनताका के कति आशा र अपेक्षा पूरा भए ? त्यसको लेखाजोखा यो स्थानीय तह निर्वाचनमै भए गठबन्धनमा जोडिएका राजनीतिक दलकै कारण देश थप बर्बाद हुनबाट जोगिनेछ ।
असल नियत र असल पात्रको अभावमा केवल स्वार्थ-सिद्धिका लागि भएको गठबन्धनले राजनीतिक दल र तिनका नेताप्रति नै अनास्था र असन्तुष्टि उत्पन्न गरेको छ । कसैलाई जिताउनकै लागि वा कसैलाई हराउनकै लागि भएको गठबन्धनको परिणामले जनता लाभान्वित हुन सक्दैनन् । गठबन्धनको बलमा जिताउने वा हराउने खेलले खराबको जित र असलको हार हुने सम्भावना प्रवल हुन्छ । यस्तो जित र हार दुवै देशका लागि घातक हुन्छ । सचेत नागरिक यो कुरामा थप सचेत हुनु जरुरी छ ।
नेपाली किसानका अन्तहीन चुनौतीहरू
निर्देशनको भुँमरीमा पुँजीगत खर्च
स्थानीय तहको क्षमता विकास
बदलिएको जमाना, फेरिएको सोच
‘लाइफ इन एलए’को ट्रेलरः
बादी समुदायको मागप्रति उदासिन
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भातृशोक
केही मन्त्रीहरुले मलाई राजीनामा